Huawei dia hanolotra ny Mate 9 amin'ny 3 Novambra any Munich | Vaovao momba ny gadget
Ny 3 novambra no daty fampisehoana an'ny Huawei Mate 9 miaraka amina fakantsary roa an'ny Leica
Omaly nihaona izahay ampahany amin'ny famaritana ny sainam-pirenena vaovao Amin'ny endrika phablet, ny Huawei Mate 9. Vonona hamoaka ny Mate 9, ilay phablet vaovaon'ny orinasa ny mpanamboatra sinoa. no handimby ny Mate 8 tamin'ny taona lasa.
Ny hetsika dia hatao amin'ny 3 Novambra any Munich, Alemana. Araka ny fanavaozana farany dia hanana ity smartphone ity fakan-tsary roa aoriana miaraka amin'ny lantiro Leica SUMMARIT, puce tsy miankina amin'ny fandrefesana ny halalin'ny saha, ny haitao mifantoka hybrid, ny fifehezana ny tanana feno ary ny fanohanan'ny RAW.
Ireo no ilay Famaritana Huawei Mate 9:
5,9 inch (1920 x 1080) efijery HD feno misy vera 2.5D, loko gamut 95%
Octa-core Kirin 960 puce
64GB / 128GB / 256GB azo velarina amin'ny karatra microSD
Android 7.0 Nougat miaraka amin'ny UI Emotion
Fakan-tsary fakan-tsary 20MP aorina miaraka amin'ny masolavitra Leica SUMMARIT, taratra LED taratra roa, laser AF
Miaraka amin'ireo 5,9 santimetatra dia eo alohan'ny phablet hamerina ao aminy ny atiny multimedia rehetra tadiavintsika. Karazana fitaovana iray izay nanohy nanintona mpampiasa bebe kokoa, ary mampiseho mazava tsara fa ny efijery lehibe kokoa hisarika ny saina bebe kokoa noho ireo terminal izay kely kokoa, toy ny Sony compact.
Ny Huawei Mate 9 dia antenaina ho tonga amin'ireto loko manaraka ireto: volafotsy, volondavenona, fotsy, champagne volamena, volamena, volondavenona ary mainty. Raha ny tsiliantsofina farany natao dia manodidina ny vidiny 599 euro ho an'ny variant RAM 3 GB ary 64 GB amin'ny tahiry anatiny, 699 Euros ho an'ny iray manana 4 GB RAM ary 128 GB ao anaty fahatsiarovana anatiny ary 789 Euros ho an'ilay manana famaritana avo kokoa satria manana 4GB RAM sy 256GB.
Hanana exclusivity i Shina an'ny Mate 9 miaraka amin'ny RAM 6 GB ary memoara 256 GB amin'ny vidiny 704 dolara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny 3 novambra no daty fampisehoana an'ny Huawei Mate 9 miaraka amina fakantsary roa an'ny Leica
LeEco dia mivarotra singa 500.000 an'ny Le Pro 3 ao anatin'ny 15 segondra fotsiny
Ny iPhone 8 manaraka dia hanana lamosina vera sy vy vy